Tababaraha Liverpool Oo Bacda Barbarihii Kooxdiisa La Hadlay Saxaafada Muxuu Yidhi Macalin Jurgen Klopp. | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa xaqiijiyay inuusan qaadan doonin masuuliyada kulanka wareega 4aad ee FA Cup ee ay la ciyaarayaan Shrewsbury Town, iyadoo Neil Critchley uu hogaaminayo koox da ‘yar.
Jason Cummings ayaa ka soo kacay kursiga keydka si uu labo gool u dhaliyo axada, isagoo heystay barbaro 2-2 ah taasoo la micno ah in kooxda ka ciyaarta League One ee Shrewsbury ay ciyaar adag ku ciyaari doonto Anfield horaanta bisha soo socota.
Ciyaartaas ayaa lagu wadaa inay ka dhacdo bartamaha xilli ciyaareedka cusub ee Premier League, iyadoo Klopp uu horay ugu ballanqaaday ciyaartoydiisa sarsare inay heli doonaan waqti fasax ah si ay uga soo kabtaan horyaalnimada.
Taasi waxay la micno tahay in Critchley uu qarka u saaran yahay inuu noqdo macallinka, macallinka Liverpool ee da’doodu ka yar tahay 23 sano jirka ayaa kormeeray ka bixitaan EFL Cup oo ay ku tegi doonaan Aston Villa horaantii xilli ciyaareedka markii Reds ay ku sugnaayeen naadiga Club World Cup.
“Fiiri, xaaladdeena waa tan soo socota: waxaan ognahay in dhowr usbuuc ay sidan oo kale tahay,” ayuu Klopp u sheegay shir jaraa’id.
Xaqiiqdii, waxoogaa waan ogaynay maxaa yeelay had iyo jeer way cadahay markii aan u soo baxnay wareega xiga sidan oo kale ayay noqon doontaa.
“Bishii Abriil 2019, waxaan warqad ka helnay Premier League-ga halkaas oo ay naga codsadeen inaan ixtiraamno fasaxa qaboobaha, ma aha inaan abaabulno saaxiibtinimo caalami ah iyo inaanan abaabulin ciyaaro tartan leh oo ixtiraam leh.
“Waxaan u sheegay wiilasha horaanba, labo usbuuc ka hor, waxaan heysan doonaa fasaxa qaboobaha, sidaa darteed waxay la macno tahay inaanan jiri doonin – waxay noqon doontaa ciyaartii ciyarta ciyaarta maxaa yeelay waxba nagama qaban karaan sida qofna uusan dan kaqabin. .
“Waan ogahay inaysan caan aheyn, laakiin taasi waa sidaan u arko, iyo sida aan u idhi, Horyaalka Premier League wuxuu naga codsaday inaan ixtiraamno fasaxa qaboobaha waana taas waxa aan sameeyno markaa ma beddeli karno, Laakiin anaga kooxdii kooxda koowaad iyo shaqaalaha ma jiri doonno halkaas.”
Klopp wuxuu sharraxay inuu qorsheynayo inuu kooxdiisa siiyo toddobaad nasasho ah, inta lagu gudajiro halkaasna ay ku mari doonaan tababarro shaqsiyadeed oo ka fog Melwood si ay u sii fiicnaadaan.
Wuxuu intaas raaciyay “Taasi waa waxa fasaxa qaboobaha uu yahay markaa ka dib tartan kale ayaa inoo sheegaya inaysan taasi muhiim aheyn, sidaa darteed waa inaan go’aannadaan horay u qaadin maxaa yeelay wiilashu qoys bay leeyihiin.
“Ciyaartoyda caalamiga ah sida Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Gini Wijnaldum, Trent Alexander-Arnold, Mo Salah, Sadio Mane, dhamaan raggan waligood ma ahan [waqti] fasax sidaas darteed isbuucaan waa isbuuca.
Waxaa taageeray Mashruuca Rubicon “Waxaan dhahay daqiiqada ay cadahay inay jiri laheyd bilaha jiilaalka bilo ka hor, ka hor inta aanan ogaanin in FA Cup uu dhex mari karo, ka dib waan xushmeyneynaa waana sameyn karnaa.”